September | 2021 | HimiloNetwork
Himilo September 11, 2021	Leave a comment 130 Views
Himilo September 8, 2021	Leave a comment 66 Views
MUQDISHO (HN) — Markii 101 sano jirka Malaysia u dhashay ee Che Ismail uu ogaaday in tallaal oo kaliya kaga xiran tahay inuu joogteeyo jamaacada masjidka, mar labaad kama fakirin mana diidin marnaba. Ismail oo ay wehliyaan inankiisa Mohd Jailani Harun oo laba wiil oo uu awoowe u yahay, waxay yimaadeen xarunta laga bixiyo tallaalka ee Kuala Nerus ee degmada Terrenganu. ...
Himilo September 8, 2021	Leave a comment 48 Views
MUQDISHO (HN) — Gu’yaalihii lasoo dhaafay, dhowr jilayaal ayaa isaga tagay mihnadda aflaam sameynta iyo madadaalada iyaga oo – ama qaadanaya diinta Islaamka – ama doonaya inay Ilaahay usoo noqdaan. Sanam Chaudhry waxay kamid noqotay kuwii ugu dambeeyey ee go’aan geesinimo ka qaata isaga haridda aflaamta iyada oo maalintii ay ku beegneyd dhalashadeeda ku dhawaaqday inay Islaam-nimadeeda usoo laabatay. Jilaagan ...
Himilo September 8, 2021	Leave a comment 49 Views
MUQDISHO (HN) — Gabdhaha Muslimaadka ee dalka Uzbekistan waxaa ugu dambeyntii loo oggolaaday inay xiran karaan xijaabka kaddib kolkii dowladdu ay laashay sharcigii adkaa ee la dul dhigay. Hadda Gabadha Muslimadda ah waxay aadi kartaa iskuulkeeda – iyada oo huwan xijaabkeeda. Wasiirka Wax-barashada, Sherzod Shermatov ayaa sheegay in tallaabtani ay jawaab u tahay baaq uga yimid shacabka. Wasiirku ma aanu ...
Himilo September 8, 2021	Leave a comment 60 Views
MUQDISHO (HN) — Adie Timmermans oo 38 jir ah waxaa laga mamnuucay inay xiriir dhow la sameyso Daanyeer ku jira carwada duurjoogta madaama la arkay inuu aad u daneynayo xiriirka bani-aadanka in ka badan noolaha ku qoyska ah. Xubnaha qoyska Daanyeerada ee kula jira carwada ayaana gaar u bixin iyo takoor ku bilaabay iyaga oo ka maseyrsan jaceylka ay gabadhani siinayso. ...
Himilo September 8, 2021	Leave a comment 63 Views
MUQDISHO (HN) — Dadka qaar waxaa ku adag inay shaqeeyaan haddii aanay helin hurdo ku filan habeenkii, laakiin haweeney ku nool Shiinaha ayaa hadda sheeganaysa inaysan hurdin muddo 40 sano ah – xattaa aysan dareemin gamaanyo ama lulmo. Li Zhanying, oo 40 jir ah kuna nool Henan waxay sheegasho lagu xaqiijiyay marqaatiga qoyskeeda iyo deriskeeda ku tilmaantay inaysan marna hurdin ...
Himilo September 8, 2021	Leave a comment 42 Views
Himilo September 7, 2021	Leave a comment 43 Views
Himilo September 4, 2021	Leave a comment 54 Views
Himilo September 4, 2021	Leave a comment 36 Views